အမျိုးသမီးအသုံးပြုမှုများအတွက်ကျော်အနှစ်သာရ Antibacterial စျေးကြီးသော Gel ကို Safe,အမျိုးသမီးအရည်မမြင်နိုင်သောကွန်ဒုံး - နှုတ်ခမ်း | မျက်စိ Cream| facial မျက်နှာဖုံး |L ကို Otion | facial Cream | မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ OEM / လိမ္မော်ရောင်, လက်ကားအရောင်း
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » အမျိုးသမီးအသုံးပြုမှုများအတွက်ကျော်အနှစ်သာရ Antibacterial စျေးကြီးသော Gel ကို Safe,အမျိုးသမီးအရည်မမြင်နိုင်သောကွန်ဒုံး
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: Sophora ထုတ်ယူ, Honeysuckle ပန်းပွင့်ထုတ်ယူ, cnidium ထုတ်ယူမှု, ရှားစောင်းလက်ပတ်ထုတ်ယူ, စသည်တို့.
မူလအစရာ: ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်နိုင်ငံ (တိုက်)
ထုတ်ကုန်အမည်: antibacterial contraception gel
OEM / လိမ္မော်ရောင်: support
ထုပ်ပိုး & ပို့ခြင်း 3g/piece or customized
ဆိပ်ကမ်း Foshan port Guangzhou port
အရှေ့. အချိန်(ရက်ပေါင်း) 15 ညှိနှိုင်းရမည့်
စွမ်းရည် 3g or customized
လုပ်ဆောင်ချက်များ & အင်္ဂါရပ်များ：
Form ကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်အပေါ်အခြေခံထားတယ် ” ဘေးကင်း, ပိုပြီးပြုပြင်, more moisturizing” quality pursuit andahighly responsible attitude to the user and using 100 % မူရင်းဂေဟစနစ်ပစ္စည်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်, ကုန်ကြမ်းပုံသေနည်း, အရည်အသွေးအစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု, beauty repair effect and other aspects of systematic research checks in order to improve the product’s technical content and beauty repair efficacy.
We adhere to the purpose of“Creating Value With Heart, Share Happiness And Beauty”, actively carry out the value concept of“responsibility, သစ်လွင်မှု, and sharing”.At the same time, we also play attention to the dissemination of social welfare, actively pursues altruistic responsibility and it is natural to the beauty.
1. မေး: ကျနော်တို့ OEM မိန့်လိုပါက, အမိန့်အရေအတွက်အပေါ်မည်သည့်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်(MOQ)?
2. မေး: သငျသညျအဘယျသို့လက်မှတ်ပေးနိုငျ?
တစ်ဦးက: ကျနော်တို့က ISO ပေးနိုငျ, GMPC လက်မှတ်များ. ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. အခြားအလက်မှတ်များ(ထိုကဲ့သို့သော FDA ကအဖြစ်, SGS, EC), လိုအပ်လျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကငျြ့သုံးနိုငျ, ဒါပေမယ့်တချို့စွဲချက်ကျခံရလိမ့်မည်.
3. မေး: ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် packages များပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုရှိနိုင်ပါသည်?
4. မေး: အဆိုပါပေးပို့အချိန်ဆိုတာဘာလဲ?
တစ်ဦးက: အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ပုံမှန်အားဖြင့် 15 ~ 30 ရက်, detail delivery date should be decided